"ရွာတိုင်းအတွက်ကဗျာလက်ဆောင်": 4.6. The Counting Method (part 3) ( ၄.၆ ရေတွက်နည်း - အပိုင်း ၃)
In order to know one’s own striving, the meditator should write down the times of counting breath in the record book in every session.
ယောဂီသည် မိမိ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် တရားထိုင်ချိန်တိုင်း ရေတွက်မှုအကြိမ် အရေအတွက်ကို မှတ်စုစာအုပ်တွင် ရေးမှတ်ထားသင့်လေသည်။
If he takes the meditation under the guidance ofateacher, daily report of the total times of counting should be submitted to the teacher. In this way, he should try to achieve the developing of counting of breaths day by day. Or he should try not to reduce the total number of counting times from the latest record. That is how the meditator should try to cultivate steadfast mindfulness by way of counting method. According to Ven. Meay zin Tawra Saradaw, at the beginning, one should spend eight hours at least to take this counting method per day.
အကယ်၍ ယောဂီသည် ဆရာ့ထံနည်းခံအားထုတ်နေပါမူ နေ့စဉ် ရေတွက်ကြိမ် စုစုပေါင်းအရေအတွက် အစီရင်ခံစာကို ဆရာ့ထံ တင်ပြသင့်လေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သူသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဝင်လေထွက်လေရေတွက်မှု တိုးတက်များပြားလာစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်သင့်လေသည်။ သို့တည်းမဟုတ် နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းအောက် ရေတွက်ကြိမ်စုစုပေါင်း ကိန်းဂဏန်း လျော့နည်းမလာစေရန် ကြိုးစားသင့်လေသည်။ ဤသည်ကား ယောဂီသည် ရေတွက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ခိုင်မြဲသောသတိတရားကို ထူထောင်ရန် မည်သို့မည်ပုံ ကြိုးစားသင့်ကြောင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ မြေဇင်းတောရဆရာတော်၏ အဆိုအရ ယောဂီသည် ကနဦးကာလ၌ ဤရေတွက်ခြင်းနည်းလမ်းကို အားထုတ်ဖို့ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ရှစ်နာရီခန့် အသုံးပြုသင့်လေသည်။
In the Visuddhimagga, the two kinds of counting; slow counting and quick counting, are explained. If one wants to count the breaths slowly, he should do asagrain measurer does. The grain measurer, having filled the basket, counts as one, and empties it. Then, he recites as “one, one” till he refills it after removing any rubbish that he may have noticed. In this way, he counts as “two, two”, and so on. Likewise,ameditator should begin to count the in-breath or out-breath as “one, one” and count up to “ten, ten”, noting each as it happens. Similarly, one who wants to count one set of in-breath and out-breath as “one” or two sets of in-breath and out-breath as “one” also can do so.
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်း၌ ဖြေးဖြေးရေတွက်နည်းနှင့် မြန်မြန်ရေတွက်နည်း ဟူသော ရေတွက်နည်းနှစ်မျိုးကို ရှင်းပြထားပေသည်။ အကယ်၍ ယောဂီသည် ဝင်လေထွက်လေကို ဖြေးဖြေးရေတွက်လိုပါမူ စပါးခြင်သူ ပြုမူသကဲ့သို့ အားထုတ်သင့်ပေသည်။ စပါးခြင်သူသည် တောင်းကိုပြည့်စေပြီး တစ်ဟု ရေတွက်ပြီးလျှင် သွန်ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူသတိထားမိသမျှ အမှိုက်သရိုက်များကို ဖယ်ရှားပြီး နောက်တစ်တောင်း ပြန်ပြည့်သည်အထိ “တစ် … တစ် …” ဟုပင် ရေတွက်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သူသည် “နှစ် …၊ နှစ် …” စသည်ဖြင့် ရေတွက်သည်။ ထိုနည်းအတူ ယောဂီသည် ဝင်လေ (သို့မဟုတ်) ထွက်လေကို ရေတွက်ရန် “တစ် …၊ တစ် …” ဟု စတင်သင့်ပြီး ထို (ဝင်လေထွက်လေ) ဖြစ်ပေါ်မှု တစ်ခုစီကို မှတ်သားပြီးလျှင် “တစ်ဆယ် …၊ တစ်ဆယ် …” အထိ ရေတွက်ရလေသည်။ ထိုနည်းအတူ ဝင်လေထွက်လေ တစ်စုံကို “တစ်” (သို့မဟုတ်) ဝင်လေထွက်လေ နှစ်စုံကို “တစ်” ဟု ရေတွက်လိုသူသည်လည်း အလားတူ ရေတွက်နိုင်လေသည်။
For one who wants to count the breath quickly after the breath becoming evident to him can count it quickly asacowherd does. A skilled cowherd takes pebbles in his pocket,awhip in hand and goes to the cow pen in the morning. He, sitting on the bar of the gate, prodding the cows in the back, counts the cows reached the gate as “one, two” by dropping the pebbles for each. When the cows come out quickly with group, he counts them as “three, four, five, ten.” Likewise, when the breath had already become evident to the meditator, he can count each breath which reaches the nose-tip along quickly as “One, two, three, four, five; one, two, three, four, five, six … seven … eight … nine … ten”. For the meditation subject which is connected with counting, the mind becomes tranquil by the support of counting, just asaboat inaswift current is steadied with the support ofarudder. The Visuddhimagga mentioned that the beginner should take this counting method until mindfulness can stand on breaths without counting because counting is just for removing thoughts and establishing mindfulness on breaths.
ဝင်လေထွက်လေကို မြန်မြန်ရေတွက်လိုသူသည် ဝင်လေထွက်လေ ထင်ရှားစွာဖြစ်လာပြီးနောက် နွားကျောင်းသား ပြုမူသကဲ့သို့ မြန်မြန်ရေတွက်နိုင်ပေသည်။ ကျွမ်းကျင်သော နွားကျောင်းသားသည် နံနက်စောစောတွင် ခဲလုံးလေးများကို အိတ်တွင်ထည့်၍ ကြာပွတ်ကို လက်စွဲလျက် နွားခြံသို့သွားလေသည်။ သူသည် နွားကျောကုန်းကို ပုတ်ခတ်၍ တံခါးဝသို့ရောက်လာသောနွားများကို စည်းရိုးတံခါးတိုင်တွင်ထိုင်၍ နွားတစ်ကောင်စီကို ခဲလုံးများဖြင့်ပစ်ရင်း “တစ်၊ နှစ်” ဟု ရေတွက်လေသည်။ နွားများသည် အုပ်စုလိုက် လျင်မြန်စွာ ထွက်ကြသောအခါ ၎င်းနွားများကို သူသည် “သုံး၊ လေး၊ ငါး၊ တစ်ဆယ်” ဟု ရေတွက်လေသည်။ ထိုနည်းအတူ ဝင်လေထွက်လေ ထင်ရှားစွာဖြစ်လာပြီးနောက် ယောဂီသည် နှာခေါင်းဖျားသို့ လျင်မြန်စွာရောက်လာသော ဝင်လေထွက်လေ တစ်ခုချင်းစီကို “တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ လေး၊ ငါး” ဟုလည်းကောင်း၊ “တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ လေး၊ ငါး၊ ခြောက်၊ ခုနစ်၊ ရှစ်၊ ကိုး၊ တစ်ဆယ်” ဟုလည်းကောင်း ရေတွက်နိုင်ပေသည်။ ရေစီးသန်သန်၌ တက်မ (ထိုးဝါး) ၏ ထောက်ပံ့မှုကြောင့် တည်ငြိမ်လာရသော လှေကဲ့သို့ ရေတွက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ကမ္မဋ္ဌာန်းတွင် ရေတွက်ခြင်း၏ ထောက်ပံ့မှုကြောင့်ပင် စိတ်သည် တည်ငြိမ်လာရပေသည်။ (ဝင်လေထွက်လေ ကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ကို) စတင်အားထုတ်သူသည် ဝင်လေထွက်လေကို ရေတွက်စရာမလိုဘဲ သတိမြဲခိုင် ရပ်တည်နိုင်သည့်တိုင်အောင် ဤရေတွက်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသင့်ကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ရေတွက်ခြင်းသည် အတွေးများကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ဝင်လေထွက်လေအပေါ် သတိတရားတည်ဆေက်ရန်အတွက် ဖြစ်၍ဖြစ်ကြောင်း ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းက မိန့်ဆိုထားပေသည်။
 Vism. I 270: Dhaññamāpako hi nāḷiṃ pūretvā ‘‘eka’’nti vatvā okirati. Puna pūrento kiñci kacavaraṃ disvā taṃ chaḍḍento ‘‘ekaṃ eka’’nti vadati. Esa nayo dve dvetiādīsu. Evameva imināpi assāsapassāsesu yo upaṭṭhāti, taṃ gahetvā ‘‘ekaṃ eka’’nti ādiṃ katvā yāva ‘‘dasa dasā’’ti pavattamānaṃ pavattamānaṃ upalakkhetvāva gaṇetabbaṃ. Tassa evaṃ gaṇayato nikkhamantā ca pavisantā ca assāsapassāsā pākaṭā honti.
 Ibid., 271: Cheko hi gopālako sakkharādayo ucchaṅgena gahetvā rajjudaṇḍahattho pātova vajaṃ gantvā gāvo piṭṭhiyaṃ paharitvā palighatthambhamatthake nisinno dvārappattaṃ dvārappattaṃyeva gāviṃ ekā dveti sakkharaṃ khipitvā gaṇeti. Tiyāmarattiṃ sambādhe okāse dukkhaṃ vutthagogaṇo nikkhamanto nikkhamanto aññamaññaṃ upanighaṃsanto vegena vegena puñjapuñjo hutvā nikkhamati. So vegena vegena ‘‘tīṇi cattāri pañca dasā’’ti gaṇetiyeva, evamimassāpi purimanayena gaṇayato assāsapassāsā pākaṭā hutvā sīghaṃ sīghaṃ punappunaṃ sañcaranti. Tatonena ‘‘punappunaṃ sañcarantī’’ti ñatvā anto ca bahi ca agahetvā dvārappattaṃ dvārappattaṃyeva gahetvā ‘‘eko dve tīṇi cattāri pañca cha. Eko dve tīṇi cattāri pañca cha satta…pe… aṭṭha, nava, dasā’’ti sīghaṃ sīyaṃ gaṇetabbameva. Gaṇanapaṭibaddhe hi kammaṭṭhāne gaṇanabaleneva cittaṃ ekaggaṃ hoti, arittupatthambhanavasena caṇḍasote nāvāṭṭhapanamiva.
 Ibid., I 271: Kīvaciraṃ panetaṃ gaṇetabbanti? Yāva vinā gaṇanāya assāsapassāsārammaṇe sati santiṭṭhati. Bahivisaṭavitakkavicchedaṃ katvā assāsapassāsārammaṇe satisaṇṭhāpanatthaṃyeva hi gaṇanāti.
Posted by အရှင်ဝိသာရဒ(ရမ္မာဝတီ) at 7:36 AM